Ngwaahịa a akọwapụtara dị ezigbo mkpa maka ntutu dị nro, ahụike
Dị ka ọ ga-amasị anyị ịmezi usoro nlekọta ntutu anyị site na ịchọta akụ dị ka ndụdụ (Ndo, Ariel), ịzụ ahịa maka ntutu ntutu kachasị mma iji kwado ụdị ntutu gị, ụdị ya, ogologo ya, na ụdị mmasị ị ga-achọ bụ nke na-adịghị mgbagwoju anya. Ahịhịa ị na-eji ekpochapụ snarls ma ọ bụ kesaa con ...
Ihe nhicha ntutu kacha mma maka ịkpụ Mane gị
Onye ọ bụla chọrọ ezigbo ntutu ntutu. Ma ọ na-enweta ụfọdụ isi ma ọ bụ naanị inye ntutu gị ụfọdụ ọdịdị, ha bụ ngwa ọrụ dịgasị iche iche dị mkpa maka ile anya kacha mma. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-achụ nta maka ihe ọhụrụ, ị ga - achọ ijide n'aka na ị ga - enweta nke a mere nke ọma ma ọ ga -
Ihe nhịahụ ntutu isi 6 ndị a ga-agbakwunye ụda na ntutu gị n'otu ntabi anya
Ma ị na-achọ iulateomi a sixties bouffant, amp na ante on a kpochapụwo updo ma ọ bụ nanị ike ụfọdụ tousled ije nile ogologo, ntutu isi ntutu isi mgbe nke na-adịghị nke. Ma ọ bụrụ na a mụrụ gị na ntutu dị mma, ma ọ bụ ntutu gị adịchara gịrịrị kemgbe ọtụtụ afọ, na-enweta olu ya ...